"Volvo 440" - imoto zabantu abasesigabeni esiphakathi zaziba, eye ashicilelwe kusukela 1988 no-1996. Ngisho lokhu imodeli wawaziwa ngokuthi i- Volvo 460. Itholakala izitayela ezimbili umzimba - sedan futhi hechtbek.
Ngesisekelo le model okusekelwe egciniwe, othathwe "Volvo 480". Isici esiphawulekayo eseyintsha kwaba isinyathelo isici emnyango emuva, futhi esasisandulele enibaziyo nobabili eyisisekelo kudivayisi efanayo lobuchwepheshe. Le modeli futhi phambili sondo injini transversely ukukhwezwa.
Zindawo zazingase zibe nama eziningana ezahlukene ezinjinini zezimoto, lathathwa "Reno". Inguqulo evamile kwaba injini 1.7-litre. Ngokuthakazelisayo, lapho esilinganayo idatha onobuhle izinjini kungaba ukuhlukanisa phakathi amandla. Futhi into wukuthi le moto ukhiqiza asigcini nje ngokulalela okushiwoyo umshini emotweni lapho kuhlanganiswa khona umoya nomusi kaphethiloli iyunithi, odala 87-95 "amahhashi", ngisho ne injini ifakwe Turbo ukushaja. motor okunjalo kwahluka umthamo 120 amalitha. a. Ngo-1990, i-brand umugqa omusha imali 1.7-litre engine, odala 102 amahhashi.
Ngo-1993, "Volvo 440 'uye washintsha abanye. yokukhanya Waguqulwa futhi kwenzakalani. Its Abaklami sinqume ukuba bahlanganyele kurediyetha Izinsimbi. Izinguquko abathintekayo ngesivuno. Ziyakwazi kusukela ngo-1993 waqala ababethi umbala emzimbeni.
The elingaphakathi futhi ayizange ithuthuke. Ngaphakathi, console isikhungo babe ukushintsha ulwazi ukuthi esikhundleni Izilawuli ephelelwe yisikhathi ukupholisa bafudumale izinhlelo.
Amajaji ithuluzi waqala ukubheka kuhle okuqinile. Kodwa amehlo kakhulu bakhangwa eshisayo ohlabayo ingaphakathi, senziwe owaqalwa futhi side indiza mpo.
Ngokuvamile, elingaphakathi impela emfushane elula. Ngaphakathi, wonke umuntu izonethezeka futhi ethokomele. Abaklami usethe ngaphakathi ukhululekile zihlalo ifomu yimpumelelo, ngombala eyenziwe high quality materials, futhi ikholomu ayo, ukuze ukulawula okuningi "athambile", izinguquko ifakwe. Ngaphandle oncomekayo ukwahlukanisa.
Kuye ukuguqulwa "Volvo 440" kudeshibhodi kungaba ezimbili zama. Inketho kuqala - a umshini wokubonisa izinga lejubane, amawashi amakhulu analog, isele nophethiloli futhi kokupholisayo lokushisa. Esesibili - konke okufanayo. Kuphela esikhundleni sekuqalile amahora ahlinzekwa tachometer. iphaneli ngamunye lwezibani okuyinto azise abashayeli lamafutha ingcindezi futhi ezingeni yamanzi ithangi Washer. Basaqhubeka umbiko ngokuphelele wavala iminyango, amabhande esivikelo emotweni, okuyinto ukhohlwe ukubophela umshayeli noma umgibeli, futhi kushaywa izibani umaka izibani. Ngokuvamile, konke kulawulwa.
Enye kahle wacabanga ukukhanyisa ingaphakathi. Ngokwesibonelo, ngenxa ukukhanyisa ukuthungela ukuthole kalula ngisho ebumnyameni. Futhi abagibeli ezingemuva babe izibani ezengeziwe zihlanganiswa zibe isibambo umnyango.
Isihlalo ezingemuva kalula ihlanganise abagibeli abathathu. Bayoba ukhululekile futhi evulekile, hhayi ezincane ngoba base isondo - 2502 mm. By the way, lemali ujabule imithwalo. In the state stowed, kuba 330 amalitha, futhi uma Songa emgqeni ongemuva, kusukela ngaleso sikhathi senyuke 1025 amalitha.
Esikhathini esizayo, injini entsha "Volvo 4402. Kwakuwusuku Injection 1.6 litre injini nge 83 Besebenzisa amahhashi, okuyinto waziwa ngokuthi B16F. Enye ezikhishwe B18U iyunithi ngu 1.8 amalitha ivolumu. Uveza 90 amalitha. a. Futhi ekugcineni, inguqulo enamandla kunazo - B20F 110-eqinile ephethe umthamo ukusebenza 2 amalitha. Ngemva kwesikhathi waqala ukuveza onobuhle esebenzisa udizili 1.9-litre engine ngaphansi hood. Wayengase ngizibonge nomthamo 90 "amahhashi".
Iningi onobuhle ayenendawo 5-band Mechanics. Kodwa kwakukhona 4-speed automatic. Nokho, la mabhokisi ayenendawo kuphela labo ukuhlela kabusha, amandla injini okuyinto idlule "amahhashi" 100.
ngokukhethekile kufanele ukumiswa imoto kuphawulwe. Yena iyona engcono kakhulu amandla futhi idla esithambile. Independent phambi izindleko, "McPherson", bakhulise - umklamo nge isiphethu ukushaqeka mfutho eceleni ezifakiwe. I Onjiniyela isinqumo ukwengeza ukumiswa isimame Amabha - ngakho wakwazi ukuthuthukisa ukuphathwa izici.
Ignition "Volvo 440" kwenzeka ngokushesha, imoto iqale kweso, ngisho ashubisa umnkantsha. ezimnandi Ikakhulukazi eziqondisa yokubeka hlobo. Inikeza ukuzwela sezingeni eliphezulu futhi impendulo.
Okuningi kusuka kule umshini amabhuleki ezinhle. Zinikeza ukuphepha okusezingeni eliphezulu asebenzayo imoto, ngisho ngaphandle ABS. Lolu hlelo kufakwe njengoba i extra ozikhethela. Front disc amabhuleki efakiwe (izinguqulo namandla kakhulu - ukukhiphela). Ngemuva, eqinisweni, futhi. Kodwa kuphela ezinguqulweni kamuva. Ngesikhathi zokuqala sigubhu isethi.
Zonke izingxenye kanye izingxenye ezisele for "Volvo 440" eside futhi athuthukiswe ngokucophelela, okuyinto akumangalisi, ngoba leli qembu waziwa emhlabeni wonke njengoba inkampani ye izimoto okuthembekile. Le modeli lwenzelwe, ukuthatha zonke izidingo ukuphepha yokwenziwa engqondweni. y Uhlaka ingaphakathi ifreyimu ngesandla esiqinile - ngokulandelana, kanye nokuqinisa indlela enhle izakhi efakwe ngaphakathi umnyango. Plus, ikholomu ayo is eklanyelwe ukuze engozini frontal labunjwa. It ngempela ikhwalithi kahle, ngoba uma kwenzeka ingozi somshayeli ubambo yezinyoni ngeke kukulimaze.
Futhi lokhu imoto lashukumisa umzimba kanye upende kakhulu. Umshini has isivikelo ngokumelene ukugqwala, futhi ngisho nanamuhla, ngemva emva kokukhululwa kweminyaka eminingi kangaka, amamodeli eziningi ziye ungakabi sezibekwe ukugqwala.
Ekugcineni - a amazwi ambalwa mayelana ukubuyekeza osele lokhu imoto, abantu ababusebenzisela. imibono engakhi cishe akekho. Zonke zithi imoto kahle futhi sizikhandle, ngisho naphezu kweqiniso lokuthi konke kubonakala yisikhathi. Ikakhulukazi uyojatshuliswa ukumiswa - Ideal for imigwaqo Russian. Yiqiniso, ngombala ubukeka olukhuni, kodwa lokhu akuwona lokususa. Okubaluleke kakhulu, ngaphakathi elula, futhi ukubonakala at kokuwa.
Phakathi amaphutha abashayeli waphawula isidingo bazilungisele umshini - ngokushesha noma kamuva-ke kwenzeka ngoba imoto akuyona into entsha. Kungase kudingeke ufake futha entsha uphethiloli, "Volvo 440" ngezinye izikhathi sidinga esikhundleni amakhandlela, bamba noma amandla ayo. Engine elilungisiwe kaningi kakhulu kwenzeka. Kodwa nganoma iyiphi umshini ngesinye une ukushintsha into, ngakho-ke kubonakala sengathi mancane amathuba kungaba kubhekwe kusimo enkulu. Le moto esihle nokunokwethenjelwa ngisho iminyaka yakhe.
Indlela ukukhetha imoto eyisekeni. Amathiphu namacebo
Imizi ngobukhulu we iVolga esifundeni: incazelo, umlando, ikakhulukazi indawo yokuhlala kanye ezithakazelisayo amaqiniso